Home Wararka Xubno ka tirsan maamulka Jubbaland oo Al-shabaab isku dhiibay
Xubno ka tirsan maamulka Jubbaland oo Al-shabaab isku dhiibay
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay isku soo dhiibeen masuuliyiin katirsan maamulka Degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo, waxaana xubnahan is dhiibay lagu soo bandhigay deegaanka Ceel Cadde ee gobolka Gedo.
Al-Shabaab ayaa munaasabada ka dhacday deegaanka Ceel Cadde kusoo bandhigtay afar nin oo Al Shabaab sheegeen in Gudoomiyaal ka ahaayeen xaafado katirsan degmada Balad Xaawo.
Ragan Al-Shabaab kusoo bandhigeen Ceel Cadde ayaa sheegay in ay masuul ka ahaayeen xaafado kuyaala degmada Balad Xaawo, waxa ayna tilmaameen in ay go’aansadeen in ay kasoo tagaan maamulkii ay ka tirsanaayeen iskuna soo dhiibaan Al-Shabaab.
Xuseen Jibriil Ibraahim oo la sheegay in uu ahaa guddoomiye ku xigeenka xafaadda 8aad ee Beled xaawo ,Xuseen Sahal Aadan oo ahaa guddoomiye ku xigeenka xaafadda7aad ee Beled xaawo, Cabdiwali Iftiin Barroow oo isna ahaa guddoomiyaha Xaafadda 7aad iyo Maxamed khaliif xasan oo isna ahaa guddoomiyaha xaafadda 8aad ee Beled Xaawo.
Maamulka degmada Balad Xaawo ee Jubbaland ayaan wali ka hadlin ragan Al-Shabaab soo bandhigeen maamulka ayaana wali xaqiijin sidoo kalana aanan beenin warkan kasoo baxay Al-Shabaab ee ku aadan in masuuliyiin Balad Xaawo katirsan isku soo dhiibeen.